Tatitra Norton: ny hosoka fanohanana teknika no fandrahonana phishing No.
Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Tatitra Norton: ny hosoka fanohanana teknika no fandrahonana phishing No.
Oktobra 19, 2021
Ny ekipan'ny mpikaroka manerantany NortonLifeLock, Norton Labs, dia namoaka ny tatitra momba ny Pulse Security Consumer Cyber ​​momba ny telovolana fahatelo isan-telovolana, amin'ny antsipirihany ireo topy maso momba ny fiarovana an-tserasera sy ho an'ny mpanjifa manomboka ny volana Jolay ka hatramin'ny Septambra 2021. Ny valim-pikarohana farany dia mampiseho fisolokiana fanohanana ara-teknolojia, izay matetika tonga ho fampandrenesana pop-up miafina miafina amin'ny fampiasana ny anarana sy ny marika amin'ireo orinasa teknolojia lehibe, no nanjary fandrahonana farany ho an'ny mpanjifa. Ny hosoka ara-teknolojia dia andrasana hitombo amin'ny vanim-potoana fialantsasatra ho avy izao, ary koa ny fanafihana phishing mifandraika amin'ny fiantrana sy fiantrana.
Norton dia nanakana ireo URL fanohanana ara-teknolojia maherin'ny 12.3 tapitrisa, izay tampon'isa amin'ny lisitr'ireo fandrahonana phishing nandritra ny herinandro 13 nifanesy teo anelanelan'ny Jolay sy Septambra. Ny fahombiazan'ity karazana scam ity dia nitombo nandritra ny areti-mifindra noho ny fitomboan'ny fiankinan'ny mpanjifa amin'ny fitaovany hifehezana ny fandaharam-potoana hybrid sy ny hetsiky ny mpianakavy.
“Mandaitra ny hosoka ara-teknolojia satria mihorohoro ny tahotra, ny tsy fahatokisan-tena ary ny fisalasalana ataon'ireo mpanjifa hino izy ireo fa miatrika loza mitatao amin'ny cyber”, hoy i Darren Shou, lehiben'ny teknolojia, NortonLifeLock. “Ny fahatsiarovan-tena no fiarovana tsara indrindra amin'ireo fanafihana kendrena ireo. Aza miantso nomerao voatanisa ao amin'ny pop-up mpanohana ara-teknolojia fa aleo manatona ny orinasa mivantana amin'ny alàlan'ny tranonkalany ofisialy hanamarina ny toe-javatra sy ny dingana manaraka. ”
Vitan'i Norton tamim-pahombiazana ny fandrahonana Cyber ​​Safe efa ho 860 tapitrisa tao anatin'ny telovolana lasa teo, anisan'izany ny malware miisa 41 tapitrisa, fisie 309,666 mobile-malware, fanandramana phishing 15 tapitrisa ary famandrihana ransomware 52,213.
Ny fikarohana fanampiny avy amin'ny Consumer Cyber ​​Safety Pulse Report dia misy:
Ny entana filalaovana virtoaly dia manana ny lanjany: Ny entana tsy fahita firy ao anaty lalao dia tadiavina fatratra ary azo amidy eny amin'ny tsena tena izy. Ohatra, lalao milalao andraikitra an-tserasera marobe an-tserasera no miantso ny "Hat Hat'ny Volo" virtoaly, izay nilanja 6,700 $ eo ho eo. Norton Labs dia nahavita fanentanana phishing natao manokana hahazoana fahazoan-dàlana hidiran'ny mpilalao sy fampahalalana fanamarinana anton-javatra roa miaraka amin'ny fikasana hangalatra sy hivarotra entana virtoaly sarobidy toy izany.
Ny pejin'ny banky an-tserasera sandoka dia maharesy lahatra: Ny mpikaroka Norton Labs dia nanondro ny fampielezan-kevitra phycode punycode mikendry ny mpanjifa banky miaraka amina kopian'ny karbaona ao amin'ny pejy fandraisam-bahiny tena izy hamitahana azy ireo hiditra amin'ny mombamomba azy ireo.
Ny karatra fanomezana nangalatra dia (saika) mitovy amin'ny vola: Indrindra fa akaiky ny fialantsasatra dia tokony ho fantatry ny mpanjifa fa ny karatra fanomezana no lasibatra voalohany amin'ireo mpanafika satria matetika izy ireo dia manana fiarovana ambany noho ny carte de crédit ary tsy mifamatotra amin'ny anaran'ny olona iray manokana. Ankoatr'izay, karatra fanomezana maro no namboarin'ilay orinasa iray ihany niaraka tamin'ny isa 19 isa sy 4-PIN. Ireo mpanafika dia mampiasa tranokala natao hanamarinana ny mizana amin'ny karatra fanomezana hahitana ny isa misy ny karatra sy ny fitambarana pin, manome azy ireo fidirana feno amin'ny vola.
Ireo hacker dia manohy mikendry ny fiangonana katolika romana sy ny vatican: Ny fikarohana nataon'ny New Norton Labs dia mampiseho ireo mpijirika, izay mety miasa any ivelan'i Shina, dia mikendry ny fiangonana katolika romana sy ny vatican. Amin'ny tranga iray, nahita mpikaroka malware ireo mpikaroka ao anaty rakitra izay toa antontan-taratasy mifandraika amin'ny Vatican nefa mamindra amin'ny fitaovan'ny mpampiasa miditra amin'ireo antontan-taratasy. Amin'ny tranga faharoa, ireo solosaina hita tao Vatican dia hita fa nametraka malware. Raha io karazana fanafihana kendrena io dia matetika ampifandraisina amin'ny fikambanana lehibe, ny olona ao anatin'ny vondrona misy tombontsoa manokana, ny mpanohitra na ny olona manana asa lehibe dia mety iharan'ny fanafihana mitovy amin'izany ihany koa, ary ny mpanjifa amin'ny ankapobeny dia tokony ho mailo hatrany amin'ny fampielezan-kevitra amin'ny phishing sy ireo pejy web voan'ny virus.
Fiainana vaovao ho an'ny Bluefields Westmoreland Jamaika
Fondation Sandals Mahafinaritra! Inc. Mamorona Smiles
Ny rahona dia simba noho ny henatra ataon'ny mpiasa
Mandeha any Etazonia? Mijanona ny fepetra momba ny sisintany COVID...
Mitazona an'i Seychelles ho ambony indrindra ao Hongria
Nifanohitra tamin'ny minisitry ny...
World Drag Racing: Torrence Racing Manatevin-daharana ny ekipa Toyota
Nanafika an'i New York ny fivoriamben'ny ONU tamin'ny...
Fomba fiaina tsara indrindra ho an'ny fahasalamana 2022
Nihaona tamin'ny famaranana "Love on Tour" i Harry Styles...
Ny seranam-piaramanidin'i Frankfurt dia nandefa biometrika 87 farany...
Vaovao amin'ny sinema ihany - Krismasy miaraka amin'ireo voafidy:...
Hybrid City Alliance dia miara-miasa amin'ny BestCities...
Misokatra izao ny Krismasy ao amin'ny Biltmore House